Publié parfilazantsaramada	 août 14, 2012 août 14, 2012 Laisser un commentaire sur
« Hatramin’izany dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin’ny roambinifolo lahy : Hianareo koa va mba te hiala ? Simona Petera namaly Azy hoe : Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay ? Hianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” (Jaona 6:66-71)
Raha jerena ny tantaran’ny Finoana izay arahintsika izao dia misy fahefana telo :
– Ny Testamenta Taloha
– Ny Apostoly sy ireo vavolombelona nanatri-maso
– Jesosy Kristy
Ireo fahefana telo ireo dia azontsika hitarafana ny fiainam-piangonana misy amin’izao fotoana izao. Ohatra akaiky azontsika raisina amin’izany dia ny asam-pifohazana nisy teto amin’ny firenentsika Malagasy. Tao ireo Raiamandreny nipoiran’izany dia Dada Rainisoalambo (tao amin’ny Tobilehibe Soatanana), Nenibe Ravelonjanahary (tao amin’ny Tobilehibe Manolotrony), Mama Volahavana Germaine na Nenilava (tao amin’ny Tobilehibe Ankaramalaza), ary Dadatoa Rakotozandry Daniel, Pastora (tao amin’ny Tobilehibe Farihimena).
Ny olona anefa mandalo ihany “ Ny lanitra sy ny tany ho levona , fa ny Teniko tsy mba ho levona!” Matio 24: 35
Ny fototra niorenan’izany asa izany dia ny Soratra Masina, ary mazava amintsika ny fisian’ireo Tenimpahefana efatra izay vakiana alohan’ny anaovana ny asa sy fampaherezana.. Mety alaimpanahy ny Fifohazana hanao izany ara-pahazarana ihany, fa noho ireo Teny ireo dia miorina ny finoana fa tena avy amin’ny Soratra Masina mihitsy no hijoroan’ny asa sy fampaherezana fa tsy noforomporinina tamin’ny sain’olombelona ihany.
Ny mahagaga anefa eto amin’ity tantara eto anatrehantsika ity (Jaon6:66-71) fa maro tamin’ireo mpianatra no nihemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony.
Ny asa nataon’I Jesosy anefa dia efa marobe sahady: talohan’izao tantara eto izao: tao ilay zanakalahin’ny tandapa nositranin’I Jesosy na dia tsy teo anatrehany aza izany marary izany, tao ny nanasitranany ilay marary tao @ farihin’I Betesda, Tao ny nampihinany ny lehilahy dimy arivo lahy, tao koa ny nitsanganan’I Jesosy tambonin’ny ranomasina.
Fa naninona ary no nisy izany fahagagana rehetra izany nefa mbola marobe tamin’ireo mpianatra no nihemotra? Ny iray tamin’ireo mpianatra aza moa tsy vitan’ny hoe nihemotra ihany fa nanolotra ny Tompo ho vonoin’ny fahavalo mihitsy!
Ny fo ratsy tsy mino, ka miala amin’Andriamanitra velona! Fahamafisampo noho ny famitahan’ny ota!
Mety misy tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’ny tena ny zava-miseho, dia tezitra amin’ Andriamanitra , na dia Izy aza no namorona ny tena, mety teo ny vavaka nangatahana zavatra nefa tsy nivaly araka izay nantenaina Azy. Dia tonga eo ny fo ratsy, ary mametraka ny fanontaniana hoe: maninona ary no ataon’I Jesosy toy izany aho?
Misy mihitsy aza fotoana izay tsy ao amin’ny tempolin’I Jehovah intsony no ahitana ny Tena Tenin’Andriamanitra madio izay antom-pijoroan’ny Fiangonana fa dia eny ambavahady sisa no asain’I Jehovah hanambarana ny sitrapony.
“Mitsangàna eo ambavahadin’ny Tranon’I Jehovah, ary torio eo izao teny izao
Ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’I Jehovaha hianareo ry eo anatrehan’I
Inona tokoa no hita ao antranon’I Jehovah? Toa zavatra hafa no mibahan-toerana ao an-tranon’I Jehovah? Fandrafiana,fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana… Fa aiza Ilay fitiavana, aiza Ilay fifaliana, aiza ilay fiadanana, aiza ilay fahari-po ,Fahamorampanahy……
Soa fa nisy ihany ny mpianatra tsy azon’ny fihemorana. Hoy mantsy Jesosy niantso Ireo roambinifolo lahy lahy: » hianareo koa va mba te hiala? «
Hoy ny navalin’ny solontenan’ireo izay naharitra tamin’ny finoana: hankany amin’Iza moa izahay Tompo ô? Hianao no manana ny Teny fiainana mandrakizay.
Noho ny fo ratsy dia miala amin’Andriamanitra ny olona , na dia olona efa mpianatry ny Tompo aza. Fa izay mitady ny Teny fiainana ihany no tsy mihemotra.
Ny Teny no fitaovana nentin’I Jesosy niaritra ny fakampanahy rehetra nafafin’I Satana teo anatrehany.
Ankehitriny, mety efa nandeha tamin’ny fifandirana isika, efa nandeha tamin’ny fifandrafiana, efa nandeha tamin’ny fifampiandaniana, tao ny adilahy, tao ny fialonana, ary efa latsaka tamin’ny fo ratsy tsy mino mihitsy aza! HOY JESOSY AMINAO ANIO: « anio raha hihaino ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny andro fahasosorana. »
Io fahasosorana io no fitaovana entin’I Satana hakana fanahy antsika, ary hitondrany Fahamafisampo, hitondra fo ratsy, ka hitaritany antsika ho amin’ny fihemorana.
Anio raha ihaino ny feony hianao aza manamafy ny FONAO! Manontany anao Jesosy izao: Hianao koa va mba te hiala? MBA tsy ho eny anbavahadin’ny fonao intsony Jesosy no hiteny fa ho ao anatin’ny fonao , dia mitenena fanekempinoana miaraka amin’ilay mpianatr’I Jesosy tsy nanaiky hihemotra:
» TOMPO ô , hankany amin’iza moa izahay, Hianao no manana ny Teny fiainana! »
Publié parfilazantsaramada août 14, 2012 août 14, 2012 Publié dansUncategorized